नेपाल र जोर्डनबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
नेपाल र जोर्डनबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता
Posted by Milap Subedi | १ कार्तिक २०७४, बुधबार १९:१७ |
१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र जोर्डनबीच बुधबार द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको भएको छ । यसेसँगै १२ वर्षपछि नेपालले कुनै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । इतिहासकै यो दोस्रो श्रम सम्झौता पनि हो ।
सम्झौतामा श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र जोर्डनका समकक्षी डा. अली अली गेजावीले जोर्डनको राजधानी अम्मानमा विशेष समारोहकाबीच हस्ताक्षर गरे ।
यो श्रम सम्झौतामा कामदारको तलब नतोक्ने तयारी भएपनि अन्तिम समयमा जनरल वर्करका लागि २५० डलरर घरेलुका लागि ३ सय डलर राखिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनायो । सुरुवातमा जोर्डन सरकारले तोकेबमोजिम हुने सम्झौतामा उल्लेख गर्ने तयारी थियो ।
नेपाली महिला कामदारको प्रमुख गन्तव्यमध्येमा पर्छ, जोर्डन । त्यहाँका गार्मेन्ट उद्योगमा नेपाली कामदारको माग उच्च छ । श्रम सम्झौतापछि त्यहाँ घरेलु महिला कामदार पनि जान पाउने भएका छन् ।
यहाँ अहिले पनि ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । यहाँको कुटनीतिक समन्वयको काम इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले गर्ने गरेको छ ।
फ्री भिसा-टिकट र २३ घण्टे बीमा ग्यारेन्टी
जोर्डनसँग भएको श्रम सम्झौतामा कामदारको आते-जाते टिकट र भिसावापतको शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले सरकारले लिएको फ्री भिसा र टिकटमा कामदार विदेश पठाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
यस्तै, करार अवधिभर कामदारलाई २४ घण्टे स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने विषय पनि सम्झौतामा छ ।
अहिले खाडी मुलुकहरुले कार्यस्थल बीमा उपलब्ध गराउन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । तर, जोर्डनले यसमा सकारात्मक कदम लिएको छ ।
दोस्रो श्रम सम्झौता
जोर्डनसँग सम्झौता भएपछि १२ वर्षपछि नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको दोस्रो श्रम सम्झौता हो । यसअघि सन् २००५ मा पहिलोपटक नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । वर्षमा चारदेखि पाँच लाख कामदार विदेश पठाइरहेको नेपालले अन्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
सरकारले प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा नेपाली कामदारले विदेशमा अनेकन कष्ट बेहोर्नुपरेको छ ।
नेपालबाट एक सय १० मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला छन् । मलेसिया, साउदी अरेबिया, लेबनान, कुवेतलगायत मुलुकसँग सम्झौता मस्यौदा आदान-प्रदान भएको वर्षौं बित्यो । तर, सम्झौतामा ती देशहरु उदासिन हुँदा नेपालले भने दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकारवादीहरुले कामदार पठाउन बन्द गरेरै दबाब सिर्जना गराउन सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । तर, सरकारले उचित पहल गर्न सकेको छैन ।
अधिकांश रोजगार गन्तव्यमा कामदारले तोकिएको तलब नपाउने, राहदानी खोसेर रोजगारदाताले नै राख्ने, समयमै पारिश्रमिक नपाउनेलगायत समस्या चर्को रुपमा बढेका छन् ।
Previous‘चुनाव सर्नेमा शंका नगरौं, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ’ : निर्वाचन आयोग
Nextसरकारसँग १० बुँदे सहमति गर्दै डा. केसीले तोडे अनसन
प्रचण्डले मधेसका माग पूरा गर्छु भनेर नक्कली कुरा गर्दैछन : प्रधानमन्त्री ओली
१७ श्रावण २०७३, सोमबार २१:३२
अवपनि माग पूरा नभए केसी फेरि अनसन बस्ने !
२८ भाद्र २०७३, मंगलवार १३:१६
नियमित योगले आत्महत्या न्यूनीकरण हुनसक्नेनियमित योगले आत्महत्या न्यूनीकरण हुनसक्ने
२४ चैत्र २०७३, बिहीबार १५:५३
‘सन्तानको अनुहार हेरेर हाँस्ने प्रयास गरिरहेकी छु’ : एन्जेलिना जोली
१८ भाद्र २०७४, आईतवार १४:१८